Imbali yelogo yeTesla | Abadali be-Intanethi
Imbali yelogo yeTesla
Inkampani nganye, uphawu lomntu, ishishini... linophawu oluchazayo. Oku kufuneka kudibanise undoqo wento oyenzayo kunye nento ofuna ukuba abanye bayiqonde malunga nebrand yakho. Kodwa ngaba uyayazi imbali yelogo yeTesla?
Ngaphambi kokuba ubuze, kuza kufuneka sibuyele umva kwiminyaka eliqela, kuba nangona ngoku isaziwa njengeemoto zombane, eUnited States zazisele zisebenza ngowe-1900. Kwenzeka ntoni ukuze bayeke ukuphumelela? Yintoni enokuyenza malunga noTesla?
1 Ibali likaTesla
2 Ithetha ntoni i-T kwilogo yeTesla?
3 Ngubani owadala uphawu lweTesla
4 Ukuvela kwelogo yeTesla
5 I logo isixelela ntoni
Njengoko uyazi, uTesla yimoto ka-Elon Musk kwaye yadalwa ngo-2003 nguMartin Eberhard kunye noMark Tarpenning. Nangona kunjalo, umnini wayo ngoku nguMusk.
Igama elithi Testa lanikezelwa kwinkampani ngokuhlonipha i-physicist kunye nomqambi uNikola Tesla.
Kwaye kukuba, ukuba awuyazi, i-logo ye-Tesla ifana nale nto kuba yinxalenye yesiqwenga esaqanjwa nguTesla ngokwakhe, icandelo lomnqamlezo wemoto yombane, awayidala ngaphezu kweminyaka eyi-125 edlulileyo.
Enyanisweni, ngowe-1901 iimoto zombane zazisele zikhona eUnited States, yaye zazisetyenziswa. Amanani asixelela ukuba iipesenti ezingama-38 zeemoto zase-US zazisebenza ngombane. Kwenzeka ntoni ke?
Ewe, iimoto zepetroli zafika zinexabiso eliphantsi kakhulu (phantse kathathu ngaphantsi kweyombane) nto leyo eyabangela ukuba ukuthengiswa kwepetroli kwehle kakhulu kwaye, ngoku, kwabangela ukuba bayeke ukuvelisa ngo-1930.
Kwakungekho kude kube ngu-1990 ukuba injineli yombane kunye nomphuhlisi wekhompyutha badibana kwaye baqala ukuvelisa, okokuqala, abafundi be-e-book, eyayiyimpumelelo enkulu. Kodwa kamva, beza kwiimoto zombane, baseka iTesla Motors kwi-2003.
Kwaye u-Elon Musk ungena njani kwinkampani? Ngotyalo-mali. Kwaye kukuba uMusk utyale imali kwinkampani yakhe, eyenza ukuba iqale ukuvakala kwaye ibuyisele izithuthi zombane kwimarike. Yile ndlela kwakubonakala ngayo xa imoto yokuqala yeTesla ibonakala, ngaloo nyaka, i-logo yayo yayiyi-T. Kodwa yayingaziwa ekuqaleni ukuba imele ntoni, kwaye bayibona nje njengeleta kaTesla ngaphandle kokwazi intsingiselo efihliweyo. uye.
Ithetha ntoni i-T kwilogo yeTesla?
Njengoko besinixelele ngaphambili, i-T kwilogo yeTesla eneneni iyinxalenye yecandelo lomnqamlezo wemoto yombane eyaqanjwa nguNikola Tesla.
Ngokwenyani, isiqwenga singqukuva, sinee-asi ezininzi, ngokungathi livili, kwaye into abayenzileyo kukuthatha inxalenye yalo elinganisa i-brand ye-T.
Enyanisweni, kuthiwa abadali ngokwabo basebenzisa izicwangciso zikaNikola Tesla zemoto yakhe yombane ukudweba icandelo elifana ne-T kwaye banquma ukusebenzisana nalo de bafezekise oko sinokukubona ngoku kwi-logo.
Ngubani owadala uphawu lweTesla
Emva kokwazi imbali yelogo yeTesla, kufuneka sithethe ngabadali bolu yilo. Kwaye ziyi studio ye-RO Studio. Beza nombono wokujoyina uphawu ngokwalo, iTesla, kunye nenye yezinto eziye zaqanjwa kakhulu ezinxulumene nezithuthi zombane, kwilogo.
Ukuvela kwelogo yeTesla
Ekuqaleni, inguqulo yokuqala ye-logo ye-Tesla yayinekhuselo emva kwe-T. Iileta zazimnyama ngelixa i-shield yayisiliva ukuba ivelele. Nangona kunjalo, uphawu aluzange luhlale ixesha elide kwaye emva kweminyaka bagqiba ekubeni bakhuphe ikhaka, beshiya konke ukuvelela ku-T ngokwakhe.
Kwezinye iimeko, uphawu alunayo i-T kuphela, kodwa ngezantsi nje (ngamanye amaxesha ngasentla) igama elithi Tesla libekwe, ngoonobumba abakhulu kwaye kwahlula i-E kunye no-A (i-E yimivalo emithathu ethe tye ngaphandle kokujoyina kwaye u-A unephezulu. inxalenye ezimeleyo kwindawo engezantsi.
Ngoku, uphawu lunokulungelelaniswa ngemibala eyahlukeneyo, ngakumbi kwimithathu: ebomvu, emnyama kunye nesilivere.
I logo isixelela ntoni
Xa i-logo ye-Tesla ibonakala, iziqinisekiso ezinjengobunewunewu, amandla kunye nobuhle zikhona xa zichaza. Kwaye kungenxa yokuba kwabaninzi luphawu lokuma okuphezulu, oko kukuthi, kuyabiza, kwaye akunakwenzeka nakubani na. Sinokuthi luphawu lwe-sybaritic kwaye bambalwa kuphela abanokufikelela kwixabiso leemoto.
Kodwa akuthandabuzeki ukuba ikwabeka umgangatho kunye nokuthembela. Nangona zibiza imali eninzi, iimoto zithembekile kwaye zide zavula nekamva lokuhamba kombane.
Ngenxa yoko, i-logo iyayichitha into yokuba umntu onemoto yeTesla ngumntu ophakamileyo (okwaziyo ukuthenga imoto kunye nayo yonke into ehamba nayo).
Ngoku ukuba uyazi ukuba yiyiphi imbali ye-logo ye-Tesla, ngokuqinisekileyo xa uyibona into yokuqala eya kuthi ifike engqondweni yakho iya kuba kukubona ukuba isiqwenga esipheleleyo apho bathatha khona i-logo yabo ibonakala ngathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Imbali yelogo yeTesla
Iinkqubo zoyilo lwegraphic lwasimahla
Uphawu lomntu: imizekelo